Firehol: azo iptables ho an'ny olombelona (Arch) | Avy amin'ny Linux
Firehol: azo ampiasaina amin'ny olombelona (Arch)
mofomamy | | soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Voalohany indrindra, mankany ny crédit rehetra @YukiteruAmano, satria ity lahatsoratra ity dia miorina amin'ny tutorial nalefanao tao amin'ny forum. Ny maha samy hafa azy dia ny hifantohako andohalambo, na dia mety ho an'ny disto hafa mifototra amin'ny systemd.
1 Inona ny Firehol?
2 Fametrahana sy fikirakirana
3 Atsaharo ny IPv6
Inona ny Firehol?
Firehol, dia rindranasa kely izay manampy antsika hitantana ny firewall tafiditra ao anaty kernel sy ny fitaovany iptables. Firehol tsy manana interface graphique, ny configurement rehetra dia tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny rakitra an-tsoratra, saingy na eo aza izany, ny fikirakirana dia mbola tsotra ihany ho an'ireo mpampiasa vao, na mahery ho an'ireo izay mitady safidy mandroso. Izay rehetra ataon'i Firehol dia manamora ny famoronana fitsipika iptables araka izay azo atao ary manome firewall tsara ho an'ny rafitray.
Firehol dia tsy ao amin'ny repositories ofisialy Arch, noho izany dia hiresaka momba izany izahay AUR.
Avy eo mankany amin'ny fisie fikirakirana isika.
Ary ampianay ao ny lalàna, azonao ampiasaina estas.
Ampandehano hatrany ny Firehol isaky ny fanombohana. Tsotra tsotra miaraka amin'ny systemd.
Nanomboka ny Firehol izahay.
Farany manamarina izahay fa ny fitsipika iptables dia noforonina ary napetraka tsara.
Atsaharo ny IPv6
Toy ny firehol tsy mahazaka ip6 latabatra ary satria ny ankamaroan'ny fifandraisanay dia tsy manana fanohanana IPv6, ny tolo-kevitro dia ny hanafoanana azy.
En andohalambo manampy izahay ipv6.disable = 1 mankany amin'ny tsipika kernel ao amin'ny fisie / etc / default / grub
Izao dia mamerina indray ny grub.cfg:
En Debian ampy amin'ny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » soso-kevitra » Firehol: azo ampiasaina amin'ny olombelona (Arch)
Tsy azoko. Manaraka ny tutorial ve ianao ary efa manana ny Firewall mihazakazaka ary manakana ny fifandraisana rehetra? Zavatra iray hafa Mazava ho azy ny tutorial ho an'ny Arch, ohatra, mbola tsy nampiasa sudo na yaourt Firewall. Na izany aza dia takatra izany. Na mety misy olona vaovao manoratra anao ary hahazo lesoka. Ho an'i Manjaro dia marina kokoa.
Araka ny voalazanao @felipe, manaraka ny tutorial ary mametraka ao anaty /etc/firehol/firehol.conf mametraka ny lalàna nomen'i @cookie ao anaty pasteur, dia efa manana firewall tsotra ianao hiarovana ny rafitra amin'ny ambaratonga fototra. Ity fanaingoana ity dia miasa amin'ny distro rehetra ahafahanao mametraka Firehol, miaraka amin'ny mampiavaka ny distro tsirairay dia mitantana ny serivisy amin'ny fomba samihafa (Debian amin'ny alàlan'ny sysvinit, Arch miaraka amin'ny systemd) ary raha ny fametrahana azy, fantatry ny rehetra izay ananany, ao amin'ny Arch ianao dia mila Ampiasao ny repo AUR sy yaourt, amin'ny Debian dia ampy ny ofisialy, ary toy izany amin'ny maro hafa, mila mikaroka kely fotsiny ao amin'ireo trano fitahirizana ianao ary mampifanaraka ny baiko fametrahana.
Mino aho fa efa nanazava ny fisalasalanao i Yukiteru.
Ankehitriny, momba an'i sudo sy yaourt, ho ahy dia tsy heveriko ho olana sudo, jereo fotsiny fa tonga amin'ny toerana misy anao izany rehefa mametraka ny rafitra fototry ny Arch ianao; ary yaourt dia tsy voatery, azonao atao ny misintona ny tarball, esory izy ary apetaho amin'ny makepkg -si.
ci dia hoy izy:
misaotra, manamarika aho.
Mamaly an'i ci
Zavatra tsy hadinoko ny nanampy ny lahatsoratra, fa tsy afaka manitsy azy aho.
Amin'io tranonkala io dia azonao atao ny manandramana ny firewall anao 😉 (misaotra an'i Yukiteru indray).
Nihazakazaka ireo fitsapana ireo tamin'ny Xubuntu aho ary tonga lafatra ny zava-drehetra! Fahafinaretana ny mampiasa Linux !!! 😀
config dia hoy izy:
Tena tsara daholo izany ... fa ny tena zava-dehibe tsy hita; Tokony hazavao ny fomba namoronana ny lalàna !!, ny dikan'izany, ny fomba famoronana vaovao ... Raha tsy hazavaina izany, dia tsy dia misy dikany firy ny apetrakao: - /
Valio ny Config
Tsotra ny famoronana fitsipika vaovao, mazava ny antontan-taratasy firehol ary tena marina amin'ny resaka famoronana fitsipika manokana, noho izany ny famakiana kely dia ho mora aminao ny manamboatra azy sy mampifanaraka azy amin'izay ilainao.
Heveriko fa ny antony voalohany nandefasana ny @cookie post toa ahy tao amin'ny forum, dia ny fanomezana fitaovana ho an'ireo mpampiasa sy mpamaky mamela azy ireo hanome fiarovana kely kokoa ny solosain'izy ireo, amin'ny ambaratonga fototra rehetra. Ny sisa tavela avela ho anao hifanaraka amin'ny filanao.
Raha mamaky ny rohy mankany amin'ny tutorial Yukiteru ianao dia ho tsapanao fa ny fikasana dia ny fampahalalana ny fampiharana sy ny fikirakirana rindrina fototra. Nanazava aho fa ny lahatsoratro dia kopia iray niompana tamin'i Arch.
Maakoba dia hoy izy:
Ary ity dia 'ho an'ny olombelona'? o_O
Andramo ny Gufw amin'ny Arch: https://aur.archlinux.org/packages/gufw/ >> Tsindrio ny Status. Na ufw raha tianao ny terminal: sudo ufw alefaso
Efa voaro ianao raha mpampiasa mahazatra. Izany dia 'ho an'ny olombelona' 🙂
Valiny tamin'i Maacub
Firehol dia tena Front-End ho an'ny IPTables ary raha ampitahaintsika amin'ny farany dia tena olombelona 😀
Heveriko fa ufw (ny Gufw dia mpifanaraka aminy fotsiny) ho safidy ratsy amin'ny resaka filaminana. Antony: ho an'ny lalàna fiarovana bebe kokoa izay nosoratako tao amin'ny ufw, tsy azoko nosakanana izany tamin'ny fitsapana ny firewall-ko tamin'ny alàlan'ny Internet sy ireo izay nataoko tamin'ny fampiasana nmap, ireo serivisy toy ny avahi-daemon sy exim4 dia hisokatra misokatra, ary Ny fanafihana "mangalatra" dia ampy hahafantarana ireo toetra bitika indrindra amin'ny rafitro sy ny kernel ary ny serivisy izay nihazakazaka, zavatra tsy mbola nahazo ahy tamin'ny fampiasana firehol na firewall arno.
Eny, tsy fantatro ny momba anao, fa araka ny nanoratako tetsy ambony, mampiasa Xubuntu aho ary mandeha amin'ny GUFW ny firewall ary nandalo ny fitsapana REHETRA an'ny rohy napetraky ny mpanoratra tsy nisy olana aho. Fangalarana rehetra. Tsy misy misokatra. Noho izany, amin'ny zavatra niainako ufw (ary noho izany gufw) dia tsara ho ahy izy ireo. Tsy mitsikera ny fampiasana maodely fanaraha-maso firewall hafa aho, fa gufw dia miasa tsy misy kilema ary manome valiny fiarovana lehibe.
Raha manana fitsapana izay heverinao fa mety hanary fahalemena ao amin'ny rafitrao aho dia lazao amiko hoe inona izy ireo ary ho entiko eto izy ireo ary hampahafantariko anao ny valiny.
Eto ambany aho dia manome hevitra momba ny resaka ufw, izay ilazako fa ny lesoka hitako tamin'ny 2008, amin'ny fampiasana Ubuntu 8.04 Hardy Heron. Inona no efa nohamarinin'izy ireo? Ny zavatra azo inoana indrindra dia hoe izany no izy, ka tsy misy antony tokony hitaintainana, kanefa na dia izany aza, tsy midika izany fa teo ilay bibikely ary azoko aseho azy, na dia tsy zavatra ratsy tokony ho faty aza izany, dia nampijanona ny demony avahi-daemon sy exim4, ary efa voavaha ny olana. Ny zavatra hafahafa indrindra dia ireo dingana roa ireo ihany no nanana ny olana.
Notanisako ho toy ny tantaram-piainan'olona manokana io zava-misy io, ary nieritreritra toy izany koa aho rehefa nilaza hoe: «Mihevitra aho ...»
izay tao anatin'ny lasakany dia hoy izy:
@Yukiteru: Nanandrana azy tamin'ny solosainao manokana ve ianao? Raha mijery amin'ny PC-nao ianao, ara-dalàna raha afaka miditra amin'ny seranan-tseranana X ianao, satria ny fifamoivoizana voasakana dia ny an'ny tamba-jotra fa tsy ny localhost:
Raha tsy izany dia mitenena bug bug
Valio ny sakaosy
Avy amin'ny solosaina hafa mampiasa tambajotra Lan raha misy nmap, ary amin'ny alàlan'ny Internet mampiasa ity pejy ity https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2Amin'ny fampiasana ny safidin'ny seranana manokana dia samy nanaiky izy ireo fa ny avahi sy ny exim4 dia mihaino avy amin'ny Internet na dia ufw aza dia namboarina ny fanakanana.
Namaha io antsipiriany kely momba ny avahi-daemon sy exim4 io aho tamin'ny alàlan'ny fanalana ny serivisy tsotra izao ary dia izay ... Tsy nitory bibikely aho tamin'izany fotoana izany, ary heveriko fa tsy mitombina ny fanaovana azy izao, satria niverina izany tamin'ny 2008, mampiasa Hardy.
2008 dia 5 taona lasa izay; avy any Hardy Heron ka hatrany amin'ny Raring Ringtail misy 10 * buntus. Ity fitsapana ity tao amin'ny Xubuntu nataoko omaly ary naverimberina androany (Aogositra 2013) dia manome lafatra amin'ny zavatra rehetra. Ary UFW ihany no ampiasaiko.
Averiko ihany: Misy fitsapana fanampiny hatao ve ianao? Amin'ny fahafinaretana no anaovako izany ary tateriko izay mivoaka avy amin'ity lafiny ity.
Manaova scan SYN sy IDLE an'ny solosainao amin'ny alàlan'ny nmap, izay hanome anao hevitra hoe azo antoka ve ny rafitrao.
Ny lehilahy nmap dia manana tsipika 3000 mahery. Raha omenao ahy ny baiko hampihatra amin'ny fahafinaretana dia hataoko izany ary hotateriko ny vokany.
Hmm tsy fantatro ny pejy 3000 lehilahy ho an'ny nmap. fa zenmap dia fanampiana hanatanterahana izay nolazaiko anao, sary eo alohan'ny sary ho an'ny nmap, saingy mbola ny safidy ho an'ny scan SYN miaraka amin'ny nmap dia -sS, raha ny safidy ho an'ny scan tsy miasa dia -sI, fa ny baiko marina Izaho dia ho.
Ataovy ny scan amin'ny milina hafa manondro ny ip an'ny masininao amin'ny ubuntu, aza atao amin'ny PC-nao, satria tsy izany no fiasa.
TPT!! Ny hadisoako momba ny pejy 3000, raha andalana 😛
Tsy haiko fa mieritreritra aho fa ny GUI ho an'izany ao amin'ny GNU / Linux hitantanana ny firewall dia ho malina ary tsy hamela ny zava-miafina rehetra toy ny ao amin'ny ubuntu na izay rehetra rakotra toy ny amin'ny Fedora, tokony ho xD tsara ianao, na zavatra hanamboarana ireo fomba hafa mpamono olona xD hjahjahjaja Tsy dia kely ny ady ataoko amin'izy ireo sy ny jdk misokatra fa amin'ny farany dia mila mitandrina ny fitsipiky ny fanorohana ihany koa ianao
Misaotra ireo vato misakana rehetra nitranga taloha tamin'ny iptables, androany dia azoko tsara ny niverl raw, izany hoe miresaka aminy mivantana avy amin'ny ozinina.
Ary tsy zavatra manahirana izy io, fa tena mora ny mianatra.
Raha mamela ahy ny mpanoratra ny lahatsoratra dia handefa sombin-tsoratra ny script firewall ampiasaiko aho izao.
## Fitsipika fanadiovana
## Mametraha politika tsy misy fangarony: DROP
iptables -P DROP OUTPUT
iptables -P MANDRITRA MITONDRA
# Miasa amin'ny localhost tsy misy fetra
iptables -A INPUT -i lo -j MANAIKY
iptables -A OUTPUT -o lo -j MANAIKY
# Avelao ny milina handeha amin'ny Internet
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –sport 80 -m mampifandray –ctstate mifandraika, naorina -j MANAIKY
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j MANAIKY
# Efa miaro tranokala ihany koa
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –sport 443 -m mampifandray –ctstate mifandraika, naorina -j MANAIKY
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp –dport 443 -j MANAIKY
# Avelao ny ping avy ao anatiny hivoaka
iptables -A OUTPUT -p icmp – fangatahana echo-type -j -mpANDRAY
iptables -A INPUT -p icmp –icmp-karazana echo-reply -j MANAIKY
# Fiarovana ho an'ny SSH
#iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -m conntrack –ctstate NEW -m fetra - limit 30 / minitra –limit-burst 5 -m comment –comment "SSH-kick" -j ACCEPT
#iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j LOG –log-preview "SSH ACCESS ATTEMPT:" –log-level 4
#iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j DROPA
# Fitsipika ho an'ny amule hamelana ireo fifandraisana mivoaka sy miditra ao amin'ny seranan-tsambo
iptables -A OUTPUT -p udp –sport 9995 -j MANAIKY
iptables -A INPUT -p udp –dport 16423 -j MANAIKY
iptables -A OUTPUT -p udp –sport 16423 -j MANAIKY
Fanazavana kely izao. Araka ny hitanao, misy ny lalàna miaraka amin'ny politikan'ny DROP amin'ny alàlan'ny default, tsy misy na inona na inona miala ary miditra amin'ny ekipa raha tsy milaza azy ireo ianao.
Avy eo, lany ny fototra, ny localhost ary ny fitetezana ny tamba-jotra.
Azonao atao ny mahita fa misy koa ny lalàna mifehy ny ssh sy amule. Raha mijery tsara ny fomba anaovany azy izy ireo, dia afaka manao ny lalàna hafa tadiaviny.
Ny fikafika dia ny mahita ny firafitry ny lalàna ary mihatra amin'ny karazana seranan-tsambo na protokol manokana, na udp na tcp.
Manantena aho fa azonareo ny momba an'io vao avy navoakako teto.
Tokony hanao lahatsoratra manazava izany ianao 😉 mety tsara.
Manana fanontaniana aho. Raha te handà ny fifandraisana http sy https ianao dia apetrako:
mpizara "http https" milatsaka?
Ary toy izany hatrany amin'ny serivisy rehetra?
Tonga ny Firefox 23 (ary taty aoriana, Iceweasel 23)